“ မိုးပျံပူဖောင်းလိုကောင် !”
ကျနော့်သူငယ်ချင်းက လူတစ်ယောက်ကို ဆဲချင်ရင် အဲဒီလို ဆဲတတ်ပါတယ်။
“ မင်းဟာကလဲကွာ ... အဲဒါ ဆဲတာလား ? မိုးပျံပူဖောင်းဆိုတာ မိုးပေါ်ကို မြင့်မြင့်တက်နေတဲ့ အရာလေကွာ ... မင်းဆဲတာက ချီးကျူးသလို ဖြစ်နေပြီ ...”
ကျနော် မေးမိတော့ သူငယ်ချင်းက ပြောတယ် ...
“ မင်းဘာသိလို့လဲ ... မိုးပျံပူဖောင်းဆိုတာ သူ့အစွမ်းသတ္တိနဲ့သူ မိုးပေါ်ကို တက်နေတာ မဟုတ်ဘူး ... အထဲမှာ လေထက်ပေါ့တဲ့ ဓါတ်ငွေ့တစ်ခုခု ထည့်ထားလို့ မဟုတ်လား ...”
“ အေးလေ ... အဲလောက်ကတော့ ကလေးတောင် သိတယ် ...”
“ အေး ... အဲဒါ မိုးပေါ်တက်နေတာ မဟုတ်ဘူးကွ ... လေပေါ် ပေါလောပေါ်နေတာ ... မင်းစဉ်းစားကြည့် ... လောကကြီးမှာ သူလိုကိုယ်လို လေထဲမှာ မနေနိုင်ပဲ လေပေါ်ပေါလောပေါ်နေရလောက်အောင် ပေါ့ရွှတ်နေတဲ့ကောင်က ဘယ်ကလာပြီး အသုံးကျတော့မှာလဲ ... ဒီကြားထဲ လေနှင်ရာ လွှင့်လွှင့် သွားတတ်သေးတယ် ... မဟုတ်ဘူးလား ...”
အင်း ... သူဆဲတာလဲ ဟုတ်သလိုလိုပဲနော် ...။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:54 PM
မိုးပျံပူဖောင်း လိုအလွယ်လိုက်ပြီးနေသူတွေက ဘယ်သူတွေလည်းနော်. ကျွန်တော့်အထင်က ..?
သူ တွေးတာ မှန်တယ်
နဲနဲ ဆက်ရှည်လိုက်ရင် ပိုအသက်
ဖတ်မိပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးလိုက်မိတယ်
မသိရင်တော့ အကောင်းတင်စားတယ်လို့ ထင်မယ်
တစ်ဖက်လူက ဘုမသိ ဘမသိ ခံလိုက်ရတတ်တဲ့ တင်စားမှုမျိုးပါလား.. သဘောကျသရှင်
တိုတိုထိထိလေးတွေ ရေးတဲ့ ကိုကိုဆူးပဲ..။
( အဲ...မိုးပျံပူဖောင်း နားတော့ သွားမထားနဲ့ပေါ့။ )
အင်း... သူ့ဘာသာပြန်နဲ့သူကျလဲ ဟုတ်နေတာပဲ
မိုးပျံပူဖောင်း လို လူစားတွေ အများကြီး ဒီတခါ ကျနော် ဆဲရင် အဲလို ဆဲတော့မယ် နားထောင်ရတာ ကောင်းတယ်နော့် ဟဲ မိုးပျံပူဖောင်း လိုကောင်မလေး သိပ်မပျံနဲ့ ငါက အောက်ကဟဲ့ လို့
ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေးနဲ့ ဆဲတာမျိုးပေါ့.. ဇူးတော့ မှတ်သွားပြီ... သဘောကျလို့..း)
မိုးပျံပူဖောင်းလို ကောင်မလေးတော့ တွေ့ချင်သေး။ သူတို့ကလည်း ပေါလောမျော ကိုယ်ကလည်း မော့ငေးပေါ့။
သူလိုကိုယ်လို လေထဲ နေတာပဲ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။
ကောင်းတယ်ဗျာ၊ ဒီနည်း မှတ်ထားအုံးမယ်။
ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စား ဟုတ်ဘူးလား..။
ဟောဗျာ သူ ကလဲ ဆဲတာ က စေ့စေ့တွေးမှ ရေးရေး
လေပေါ်မှာ လွင့်မျောနေတာ မကောင်းဘူးလား
အားလုံးကို အပေါ်စီးကနေ မြင်ရသေးတယ်..
အရမ်းကောင်းတယ် မိုးပျံပူဖောင်းလိုလူတဲ့ Good !
မိုးပျံပူဖောင်းကို အားကျတာမျိုးတော့ သိပ်မဖြစ်ပေမယ့် မြင့်မြင့်သွားတာကို ကြည့်ပြီး အမြင့်ကြီး ရောက်သွားပြီ ကောင်းလိုက်တာလို့တော့ တွေးဖူးတယ်။ နောက်ပြီး ဘယ်တော့ ပြန်ပြုတ်ကျမလဲတော့ အမြဲ တွေးကြည့်ဖူးတယ်။ သူက အချိန်မရွေးပြုတ်ကျနိုင်တာကိုး..။ သဘာဝက ဒဏ်ခတ်ပြီးသား...။
တိုတိုလေးနဲ့ အိုက်ဒီယာမိတယ်..။ သဘောကျသွားတယ်။
ွှ့မှန်လိုက်တာ။ လောကမှာ မိုးပျံပူဖောင်းလို လူတွေ အများကြီးပါလား...
မိုးပျံပူဖောင်းလိုကောင် ....နည်းအသစ်ရပြီ ဟိဟိ
တခါတလေတော့လဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေနှင်ရာ လွှင့်ချင်ရာ လွင့်ချင်သား... :)
ဟုတ်ပါ့ နော် . .
အကိုတော်ပြောမှပဲ တွေးမိတော့ တယ်. .
ဖတ်ပြီး အားရပါးရ ပြုံးသွားတယ်။း)))